Kazakstàna: Tsangambato, Toekarena, Fananahana sy Haino Amanjery · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2018 18:52 GMT
Araka izany, mamoaka ny sarin'ilay tsangambato “Eternal Fire” (Afo Mirehitra Mandrakizay) ao Atyrau izay tanàna iray antsoina koa hoe renivohitry ny solika ao Kazakstàna i pycm. Natsangana tany amin'ny tanàn-dehibe rehetra tao amin'ny Firaisana Sovietika ny tsangambato “Eternal Fire” ho fahatsiarovana ireo niharam-boina sy ireo miaramila tamin'ny Ady Lehibe II. Matetika, ary indrindra, tsy nirehitra teo afovoan'ny kintana misy tendrony dimy akory ny lelafo. Kanefa, hita amin’ny sary vaovao avy ao Atyrau fa tsy ao indray izany afo izany:
“Tsy mirehitra ny afo. Tsy ampy entona voajanahary sy fahatsiarovana ary feon'ny fieritreretana ny renivohitry ny solika ao Kazakstàna” hoy i pycm [ru].
Mitatitra io olana mikasika ny tsangambato io ihany koa i pr-odin, izay miresaka momba ilay fikasàna hanangana tsangambato fiantràna ao an-drenivohitr'i Astana. Vinavinaina ho atokana ho an’ny tsingerintaona fahafolon’ilay tanàna amin'ity fahavaratra ho avy ity io tsangambato io, ary efa manangom-bola fandraisana anjara ireo tompon-kevitra ankehitriny:
“Misy idirany amin'ny fiantràna ve ity?… Tokony eo amin’ny 1 na 2 hetsy dolara (100.000$ : 317.500.000 Ariary eo ho eo) no vola lany araka ny tombatombana ambany indrindra … Azonao an-tsaina ve hoe firy ny zava-tsoa mety azo atao aminà tetibola toy izany, izay ho laniana amin'ny Tsangambaton’ny Fiatsarambelatsihy “[ru].
Tsangambato iray hafahafa ihany koa ilay sary sikotr'i Charlie Chaplin ao Kustanai (Avaratr’i Kazakstàna). Manamarika ny maha hafahafa ny fisiany indrindra ao amin’ilay tanàna i Nurgeldy, nopotehina tamin'ny herintaona manko ny hany mba toeram-pijerena horonantsary nisy tany (izay nalaza ho nanana ny efijery lehibe indrindra tao amin'ny firenena).
Mitohy ny tebitebin’ireo bilaogera maro – ary tena mitombona izany ahiahy izany – momba ny toejavatra ara-toekarena sy ny fiakaran'ny vidim-piainana ao an-toerana. Nanontany ny antony maha lafo kokoa ny sakafo i Eev:
“Azoko ny mampiakatra ny vidin'ny akanjo sy ny kojakojan-tarehy”, hoy izy. “Satria niakatra be tampoka ny sandan’ny euro, ka nanjary lafo dia lafo ny entana Eoropeana. Fa inona no nitranga tamin'ny mofo, siramamy, ronono ary varimbazaha? “[ru].
Niteraka adihevitra mafana ilay fanontaniana, izay nanoloran’i renovated valinteny miavaka hoe:
“Tena tsotra ny anton’izany – mba te-hividy zavatra lafo vidy sy kojakojan-tarehy Eoropeana ihany koa ireo mpivarotra mofo, siramamy, ronono ary serealy ” [ru]
Mizara ny fandinihany mikasika ny fiantraikan'ny fivoaran'ny krizy eo aminà orinasa iray i Small-horsy – maro ireo fandraharahàna niasa tao anatin'ny tsenambarotra mangatsiaka no nitranganà fambara mitovy amin'izany:
“Tsy manam-bola handoavana ny tetikasa ny mpanjifa, ka manolotra takalo… Nahitàna fihenana lehibe teo amin’ny sehatry ny asa, maro ireo mpiasa tsy maintsy nandeha nanao fialantsasatra, anisan'izany ireo tsy andraisan-karama” [ru].
Mandritra izany fotoana izany, mampitandrina i megakhuimyak fa tsy volan’ny fialantsasatra ihany ny volana May, fa volana ifaranan'ny taom-bola ihany koa:
“Nanao ny totalin’ny kaontiny ireo banky sy sampan-draharaha hafa mikirakira vola. Banky enina lehibe hatreto no niaiky ny tsy fahombiazanà fampindramam-bola mitentina 1.179 lavitrisa dolara. Ho hitantsika eo izay holazain'ny sasany. Amin'ny faran'ny taona no hivoaka ny resaka tena matsiro” [ru].
Manohana ilay solombavambahoaka vavy nanohitra ny fanitsian-dalàna mahakasika ny fananana vady maro izay natolotry ny vondrona parlemantera i Aslili [ru]. Miteraka alahelo fara-fahakeliny ny fisianà adihevitra manohitra olana lehibe ara-piarahamonina sy ara-toekarena toy izany eo aminà Mpanao Lalàna anaty antoko tokana. Etsy ankilany, manohy ny resaka fananahana kosa i M-kaa, maneho ny fomba fijeriny ny fifanaraham-panambadiana ao Kazakstàna. Arahany fihetseham-po ny filazàny fa avo nòho ny any amin'ny firenena Tandrefana ny lentan’ny fianakaviana sy ny fanambadiana any Kazakstàna [ru].
Amin’ny ankapobeny dia voarakitra anaty bilaogy ny sehatry ny haino amanjery sy ny Aterineto. Miresaka momba ny fifindramonin'ny media an-taratasy sy anaty vohikala izay niatrika sakana tamin'ny fisintomana mpamaky ny vondron'ny LiveJournal, journalistkz, tao amin'ny tontolon'ny bilaogy [ru]. Lasa vahaolana tsotra ho azy ireo tokoa ny bilaogy– ilay fitaovana tsy mbola nofehezin’ny haino amanjery sady maimaimpoana hisintomana mpanaraka. Mitatitra i Hackuna fa mikasa ny hampiditra ny Yandex JSC – orinasa iray lehibe misahana ny Aterineto ao Rosia – amin’ny fampivelarana ny sampana Kazaka ao anatin'ny vohikala maneran-tany ny masoivohom-panjakana ICT Kazakh [ru]. Ary manome tsiny ny fahitalavitra Kazaka Caspionet, izay mandefa fandaharana any ivelany, i epolet:
“Tokony hahitsy ny filazàna ny toetr'andro. Tokony havahana ho fanjakana hafa mihitsy i Montenegro fa tsy Serbia sy Montenegro mitambatra, mba hisorohana ny henatra ho an'ny fahitalavitsika “[ru].
Navoaka tao amin'ny neweurasia (rohy maty) ihany koa.
Kazakhstan 18 ora izay